संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर
मोर्चाले प्रादेशिक सीमांकनलाई ‘बटमलाइन’ बनाउँदा निकासको गाँठो त्यसमै अड्किरहेको छ । मोर्चाले तराई–मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । ..... मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भइरहेको छ । विकास निर्माणदेखि लिएर सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित छन् । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनरत मोर्चा पनि जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत हुन जरुरी हुन्छ । मोर्चाले जतिसक्दो चाँडो आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्छ या त्यसको नाका केन्द्रित स्वरूप पनि फेर्नुपर्छ । माग राखेर सरकारलाई दबाब दिने नाममा जनतालाई निरन्तर सास्ती दिएर आन्दोलन गरिरहनु आफैंमा ठीक होइन । ...... वार्ता र संवादबाट निकास निकाल्नुको विकल्प छैन, न घुर्कीले समाधान दिन्छ न त बेवास्ताले ।
नेतृत्व संकटबारे बहस : 'यही नेतृत्वले कहिल्यै मुलुक बन्दैन' [भिडियाे]
पूर्व मुख्यसचिव पौडेलले आफूले सचिव र मुख्य सचिव हुँदा ५ जना प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेको भन्दै उनीहरु सबैलाई पर्दा पछाडिबाट कसैले सञ्चालन गर्ने गरेको टिप्पणी गरे । .... कांग्रेस नेता थापाले आगामी महाधिवेशनमा आफूले खोसेर नेतृत्व लिने बताए । 'नेतृत्व मागेर होइन खोसेर लिने हो', उनले भने, 'अब म चाँडै खोसेर लिन्छु, तपाईंहरुले चाँडै थाहा पाउनुहुन्छ ।'
तर, नाकाबन्दी हुनुअघि र पछि उही परिमाणमा सिलिन्डर संख्याको ग्यास आयात भए पनि अधिकांश उपभोक्ताले पाएका छैनन् । ...... उद्योगहरूले भूमिगत डिलरबाट बिक्री गर्दै आएकाले सबै उपभोक्ताले पाउन नसकेको बिक्रेताहरूको भनाइ छ ।
भूमिगत डिलरबाट ग्यास पठाउँदा पर्याप्त मात्रामा कालोबजारी गर्न पाइन्छ ।
उनीहरूका अनुसार केही व्यवसायीले कालोबजारी गर्नकै लागि ग्यास वितरणको विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने भनिए पनि निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आएका छन् । ....... निगमका नि. नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले केही सातायता आयातमा केही सुधार भए पनि रक्सौल नाका सहज नहँुदा आपूर्तिमा समस्या भएको बताए । रक्सौलबाट भित्रिने इन्धन मुख्यत: उपत्यकाका लागि हो । ती नाकाबाट करिब ६० प्रतिशत आयात हुन्छ तर सोही नाका अवरोध छ । ..... ‘मुख्य नाका अवरोध हँुदा मागको करिब ४० प्रतिशत मात्रै इन्धन (पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, हवाई इन्धन र मटितेल) आयात भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले जिल्लाका लागि भित्रिएको इन्धन उपत्यकामा तानेर वितरण भइरहेको छ ।’
नायक खोजिरहेछ देश
त्यही कुष्ठाले होला हामी नायकलाई उसको संघर्षको समयमा घृण गछौ, कुरा काट्छौ अनि नायक बनेपछि उसकै गुण गाउाछौ । हामीमा त्यो दैद्ध चरित्र हावि छ । तर हामी एक हातमा ढुंगा र अर्कोमा माला लिएर सयमको क्षितिजमा केवल नायकको प्रतिक्षा गरिरहेका हुन्छौं । .....
समाज आफैमा खलनायक हुन्छ ।
समाज खलनायक हुनु भनेको समाजका विश्वास,आस्था,नियम,प्रणाली, प्रकृया, संमचना,परिस्थिति, समय, स्थानमनोविज्ञान, विचार, संस्कार, अवधारण धर्म परिवार,सम्बन्ध, शान्ति आदि जस्ता तत्वहरु खलनायकत्वको आभार बन्दछन् । यसैको परिधीभित्र नायक बन्ने पात्र पनि आफैमा जेगिएको हुन्छ ....... किनकी नायक र खलनायकको भिडन्तमा समाज छाती थापेर रगत पिउन बाध्य हुन्छ । यसकारणसमाज खलनायक जन्मन रोक्न पनि सक्दैन । हरेक समाजको नियती आफैभित्र आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमल्लिनु हो । .....
समाजले नै पहिला खलनायक जन्माउछ अनि बाध्य भएर नायक पनि जन्माउछ ।
...... नायकले चलचित्रको दुई तिहाई भन्दा बढी समयसम्म दु:ख पाइरहन्छ पिडा झेलिरहन्छ उ सागसागै उसका परिवार आफन्त साथीभाइले पनि उस्तै नियती बेहोरिरहन्छन् । तर अन्तमा नायकले उसको संघर्ष आत्मशक्ति र बालिदान उच्चतम विन्दुमा पुर्‍याएर खलनायकसाग चुनौती सााट्छ । उसको मानवता र महानताकै कारण सफलता हासिल गर्दछ ।खलनायकत्व समाप्त गर्दछ । ....... अन्यायका कारण सोझासाझा मानिसहरुका जीबनलाई दु:खी बनाइरहेको छ । व्याख्यै गर्न नसक्ने गरी खलनायकहरु हाासिरहेका छन । अनि हाम्रा सपना, चाहना आवश्यकता, अधिकार, भविष्य वर्तमान स्वाभीमान अस्तित्व आदि भुट्दै छन । के अव समय भएन र नायक जन्मने? ..... नायकत्व त्यस्तो भाव हो जसले सबैमा सकारात्मकताको अनुभूती गराउाछ । नायकत्व त्यस्तो सपना हो जो सवैको साझा बन्दै जान्छ । .... नेपाली जनताले त्यही रात जुजारीरहेका छन विहानी आउाछ भन्ने आशमा ।
आन्दोलनको स्वरूप फेर
मधेसको जनजीवन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक दृष्टिकोणले ठप्प बनेको महिनौं भइसक्यो । त्यसको जति व्याख्या गरे पनि अहिले कम नै हुन्छ । हरेक परिवारसँग कुनै न कुनै दुःख, दर्द र संघर्षका कथा छन् । साढे ५ महिना लामो अझ कहिले सहज हुने यकिन नभएको बन्द झेल्ने पुस्तामा दर्ज भएका छन्, मधेसका वासिन्दा । ..... बन्द र नाकाबन्दीले उकुस-मुकुस भई पीडामा रहँदा पनि मधेसीहरु अधिकारको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सक्रिय सहभागी भइरहेछन् । आज, भोलि भन्दाभन्दै काठमाडौंतिर आशाको नजर लगाएको महिनौं भइसक्यो । अनेकौं निर्णायक भनिएका वार्ताहरु विफल भएका समाचारहरुले नैराश्यता मात्र बढाएको छ । .....
मधेसमा आफूहरुले धेरै मत पाएको भनेर घमन्ड गर्ने र भाषण छाँट्दै हिँड्ने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई आफ्ना मतदाताको पीडा र भावना बुझ्ने रत्तिभर फुर्सद छैन । उनीहरु भविष्यमा हुनसक्ने राजनीतिक नाफा-घाटाको जोड-घटाउको हिसाब निकाल्नै व्यस्त छन् ।
...... जनआन्दोलन होस् वा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सबैले आफ्नो सफलताका लागि काठमाडौंलाई प्रहार गर्ने, गलाउने र थकाउने रणनीति अपनाए । र आन्दोलनको उपलब्धिका लागि त्यो सूत्र स्थापितजस्तै भएको छ । ...... नाकाबन्दीले काठमाडौंलाई गलायो र थकायो पनि । सम्पूर्ण बजार कालाबजारीको नियन्त्रणमा पुगेको छ । तर चलाख र चतुर सरकारले 'राष्ट्रवाद'को नक्कली मास्कले आफ्नो थाकेको/गलेको अनुहारलाई छोप्ने र आफू विरुद्धको प्रहारलाई छेक्न त्यसलाई कवचसमेत बनाएको छ । ......
ज्ञानेन्द्रकालमा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई निरुत्साहित पार्न उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने नाममा शाही आयोग बनाएझैं अहिले मधेसीहरुको नागरिकता छानबिनको प्रश्न उठाइँदैछ । सत्तामा बसेकाहरु मधेसको मुद्दाको गम्भीरता बुझ्नुभन्दा आन्दोलन र आन्दोलनकारीलाई बदनाम गर्नमात्र उद्यत देखिएका छन् ।
...... मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी र भूकम्प पीडितको कहालिलाग्दो अवस्थाले अस्तव्यस्त क्षणमा सरकारमा रहेको कम्युनिष्ट गठबन्धन प्रतिपक्षमा भएका भए आफू विपरीतको सरकारलाई अहिलेको जस्तो सहज पक्कै हुन दिँदैनथे । ........ सरकार र प्रतिपक्ष उस्तै-उस्तै भएपछि समस्या थप बल्झिएको हो । ..... संविधान जारीपछि प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दी सुरु भएको तेस्रो दिन असोज ९ मा आयोजना गरेको सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा भनेका थिए-
'तपाईंहरु अहिले साँझ घर पुगेपछि नाकाबन्दी खुलेको समाचार थाहा पाउनु हुनेछ ।'
त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री भएयता चार महिनाको अवधिमा उनले त्यो कुरा पटक-पटक दोहोर्‍याउन अप्ठ्यारो मानेका छैनन् । तर समस्य चार महिनाअघि जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै छ ।
मानिसहरु आधा ग्यास भरिएको सिलिन्डर र केही लिटर पेट्रोलका लागि मन्त्रीको सिफारिस खोज्दैछन् ।
प्रधानमन्त्रीका कुरा मानिसलाई पत्यार लाग्न छाडेको छ । ....... मधेसमा जारी आन्दोलनले उहिल्यै 'जनआन्दोलन'को रूप लिइसकेको छ । एकै दिन एकै समयमा १ हजार ५ सय किलोमिटरको दूरीमा लाखौं मानिसको सहभागिता भएको मानवसाङ्लो नै मोर्चाले आह्वान गरेको आन्दोलनलाई 'जनआन्दोलन' भन्नलाई पर्याप्त हुन्छ । .....
आन्दोलनले मधेसको मुद्दालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बलियोगरी स्थापित गराउन सफल भएको छ ।
...... आफ्नो सबै दुःख सहेर आन्दोलनमा सघाएका मधेसी जनताको अहिलेको भावना आन्दोलनको स्वरुप फेरियोस् भन्ने पक्षमा पुगेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिमा दाहालले भने, ‘कांग्रेसलाई पनि बायस नगरौं’
ठूला परियोजना तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय
‘संविधान निर्माणमा कांग्रेस सँगै छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘उसलाई बायस गर्नु हुँदैन ।’ .....
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द र सिके राउतका गतिविधिप्रति संकेत गर्दै हिंसात्मक र पृथकीकरणका विरुद्ध राष्ट्रवादी शक्तिहरुको एकतामा जोड दिएका थिए ।
कांग्रेस–तमालोपा वार्ता: संवादहीनता तोड्ने प्रयास
स्वास्थ्य उपचारको क्रममा १२ दिनको दिल्ली बसाईपछि बिहीबार राति काठमाडौं आएका ठाकुरलाई कोइरालाले सम्पर्क गरी भेटघाटका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । ‘कोइराला आफैं ठाकुरजी कहाँ आउने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो,’ ठाकुर निकट स्रोतले भन्यो ‘तर, उहाँलाई आवागमनमा अप्ठ्यारो हुने बुझेर ठाकुरजी नै कोइराला निवास पुग्नु भएको हो ।’ ..... दुई नेताबीच व्यक्तिगत स्तरमा अनौपचारिक भेट भएको र दुईबीच एक अर्काको स्वास्थ्यबारे सोधासोधपछि केहीबेर मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमबारे कुराकानी भएको लालले बताए ।
मोर्चा कार्यकर्ताद्वारा लिला कोइरालाको घरमा आक्रमण
जनकपुरमा तनाव, ५ घाइते
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले जनकपुरको ब्रम्हपुरस्थित कांग्रेस नेतृ लिला कोइरालाको घर घेरेर ढुंगामुढा गरेपछि तनाव भएको छ । प्रहरीले मोर्चा कार्यकर्तालाई हटाउने क्रममा केही राउण्ड अश्रु ग्यास र लाठी प्रहार गरेको छ । ..... कांग्रेसका जिल्ला सभापति रामसरोज यादवले कोइरालको घरमा ढुंगा र पेट्रोल बम प्रहार गरिएको बताए ।
मोर्चाका नेताले सभासद समेत रहेकी कोइरालालाई शनिबार भेटेर जनपुर छाड्न आग्रह गरेको थियो । संविधानमा हस्ताक्षर गरेका सभासदलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइएको भन्दै सदभावना अध्यक्ष संजय सिंहले आक्रोशित कार्यकर्ताले त्यही भएर उनको बिरोध गरेको बताए ।
प्रहरीको प्रहारबाट मोर्चाका ५ जनाबढी घाइते भएका छन् । ......कोइरालाले भने आफू आफ्नो घर आएको र कसैले बिरोध गर्दैमा घर छाडेर जान नसकिने कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।
कांग्रेस अधिवेसन वहिष्कार
मधेसी मोर्चाको अवरोधले यस जिल्लामा हुन नसकेको गाउँ/नगर अधिवेसनको सिलसिलामा महासमिति सदस्य हरिशंकर यादवको नेतृत्वमा सात वटा गाउँ इकाइ समितिले आइतवार अधिवेसन बहिष्कार गरेका छन् । बहिष्कारमा क्षेत्रीय सचिव मदन सिंहसमेत सहभागि थिए । ....
काँग्रेस नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको संविधानमा मधेस तराईको मागलाई उही सरकारले वेवस्ता गर्दा समस्या टुंगोमा नपुगेको भन्दै उनीहरुले अधिवेसन वहिष्कार गर्नु परेको बताउँछन् ।
..... 'कांग्रेसको गतिविधिले तराईमधेसका नागरिकले दुःख पाइरहेको छ, त्यसैले हामीले महाधिवेसनमा भाग लिनुको अर्थ छैन्, महासमिति सदस्य हरिशंकर यादवले भने, 'मधेसको माग पुरा गराउन काँगेसको भुमिका न्युन भयो ।' महासमिति सदस्य यादवको नेतृत्वमा कलैयामा पत्रकार सम्मेलन गरी अधिवेसन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिएको हो । पत्रकार सम्म्ोलनमा सयौं स्थानीय नेताकार्यकर्ताको सभहभागी थिए ।
मिडियामा मधेस [भिडियो]